चीनको खतरनाक कदमको पर्दाफास: ढुवानी कन्टेनरहरूमा मिसाइलहरू लुकाउँदै,के हो कारण ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home BannerNews चीनको खतरनाक कदमको पर्दाफास: ढुवानी कन्टेनरहरूमा मिसाइलहरू लुकाउँदै,के हो कारण ?
चीनको खतरनाक कदमको पर्दाफास: ढुवानी कन्टेनरहरूमा मिसाइलहरू लुकाउँदै,के हो कारण ?
हिरासत शिविरमा १० लाख भन्दा बढी उइगर मुस्लिमलाई दुर्व्यवहार गरेकोमा चीनको विश्वव्यापी निन्दा भएको छ। तर, बेइजिङले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
चीनले गोप्य रूपमा केही प्रकारका मिसाइलहरू विकास गरिरहेको आरोप छ। चीनले यी मिसाइलहरूलाई ढुवानी कन्टेनरहरूमा लुकाउन सक्छ ताकि तिनीहरू विश्वभरका बन्दरगाहहरूमा तस्करी गर्न सकून्। साथै तिनीहरू कुनै चेतावनी बिना सुरू गर्न सकिन्छ। द सनको रिपोर्टका अनुसार विश्वका महासागरहरूमा चीनका जहाजहरूको विशाल फ्लीटहरू छन्। केही पश्चिमी पर्यवेक्षकहरूले विश्वास गर्छन् कि चीनले यी क्षेप्यास्त्रहरूको विकास युद्धपोतहरूको नयाँ फ्लीट प्राप्त गर्नु बराबर हो। यी कन्टेनरहरू सामान्य कन्टेनरहरू जस्तै देखिन्छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई अन्य कन्टेनरहरूसँग भण्डारण गर्न सकिन्छ र संसारको विभिन्न भागहरूमा ढुवानी गर्न सकिन्छ।
उही समयमा, चीनले यी मिसाइलहरूलाई शत्रुको बन्दरगाहमा पुर्‍याएर अचानक आक्रमण गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन र रणनीति केन्द्रका रिक फिशरले भने कि चिनियाँहरूसँग स्टिल्थ मिसाइलहरू हुन सक्ने सम्भावना छ। अमेरिका र चीन आर्थिक र सैन्य दुवै रूपमा विश्वको शीर्ष महाशक्ति बन्ने दौडमा छन्। ताइवानको भविष्यलाई लिएर दुई देशबीच तनाव छ। जहाँ चीन ताइवान कब्जा गर्ने मनसाय लिएर बसेको छ, अमेरिकाले बेइजिङबाट ताइवानलाई जोगाउने वाचा गरेको छ ।
हिरासत शिविरमा १० लाख भन्दा बढी उइगर मुस्लिमलाई दुर्व्यवहार गरेकोमा चीनको विश्वव्यापी निन्दा भएको छ। तर, बेइजिङले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । नयाँ मिसाइलहरूको प्रोटोटाइप 2016 हतियार मेलामा देखियो। त्यसबेलादेखि नै उनी अब सक्रिय रूपमा परिचालन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । फिशरले भने कि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो इच्छा अनुसार अराजकता सिर्जना गर्न कन्टेनराइज्ड मिसाइलहरू प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ।
कन्टेनर जहाजबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको एकमात्र सार्वजनिक रेकर्ड इजरायलले गरेको परीक्षणको फोटो हो। यसैबीच, स्टकटन सेन्टर फर इन्टरनेशनल ल थिंक-ट्याङ्कले नागरिक जहाजहरूमा गोप्य रूपमा हतियार लोड गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुन सक्ने बताएको छ। व्यापारिक जहाजमा गोप्य रूपमा चिनियाँ क्षेप्यास्त्र लुकाएर राखेका कारण नागरिक जहाजमा खतरा बढेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
Previous articleनेपालको जग्गा कब्जा गरेपछि चीनले भुटानमाथि दाबी गरेको छ !
Next articleचीनले कङ्गोको महत्वपूर्ण खनिजको नियन्त्रणमा यसरी जमायो कब्जा !